Bhodhi Rinopa Mabasa eHurumende kuMakambani Roshorwa Zvikuru
Vanotengesera hurumende zvinhu pamwe nekuita mabasa avanenge vanzi vaite nehurumende vashora bhodhi rinoona nezvekutengwa kwezvinhu zvehurumende, re state procurement board, vachiti bhodhi iri harisi kufambisa basa raro nemazvo zvinopedzisira zvaita kuti vatadze kuita mabasa avanenge vakatarisirwa kuita nenguva.
Vachipa humbowo kukomiti yeparamende inoona nezvebhajeti, kushandiswa kwemari pamwe nekurongwa kwehupfumi hwenyika, vanoita mabasa ehurumende akafanana nekuvaka zvivakwa zvehurumende vati state procurement board inononoka kufambisa mapepa zvinopedzisira zvaita kuti mabasa asaitwe nenguva.
Mutevedzeri wemutungamiri wesangano re Construction Federation of Zimbabwe, VaGodfrey Mpofu, vaudza komiti iyi kuti bhodhi iri riri kuita zvinhu zvizhinji muchavande.
Mumwe ane kambani yaisimbopihwa mabasa nehurumende, Va Daniel Garwe, vaudzawo komiti iyi kuti state procurement board iri kupa mabasa mazhinji kumakambani ekunze asiri kukwanisa kuita zvaanenge anzi aite.
Mumwe anoshanda nebazi rehurumende rinoona nezvekuvakwa kwezvivakwa zvehurumende, kana kuti Public Construction, Va Joseph Mhakayakura, vati chimwe chinoita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka inyaya yekuti makambani anonzi kana achiita basa rinodarika zviuru makumi mashanu zvemadhora, anofanira kutanga aenda kutenda bhodhi iro bhodhi racho richizononoka kufambisa mapepa zvinozoita kuti mabasa anenge achida kuitwa, anonoke kuitwa.
Gurukota rezvemari, VaTendai Biti, vakaudza vatori venhau masvondo maviri adarika kuti hurumende ine hurongwa hwekuchinja mutemo unobata mashandiro ebhodhi iri kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Va Biti vakati bazi ravo riri kushushikana kuti mamwe makambani ari kupihwa mabasa nebhodhi iri haatombozivikanwe uye mamwe acho anoshanda ari pasi pemuti zvekuti panotoda kuongororwa zvakasimba mashandiro ari kuita bhodhi iri.